Iran: Mpitoraka blaogy roa ahiana hovonoina ho faty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Febroary 2010 17:47 GMT
Vakio amin'ny teny polski, русский, Français, Nederlands, বাংলা, Italiano, Español, عربي, English
Mpitoraka blaogy roa sady mpikambana amin'ny “Komity miaro ny Zon'olombelona” (Chrr), Mehrdad Rahimi sy Kouhyar Goudarzi (sary etsy ambony: Goudarzi, ankavia, ary Rahimi, ankavanana) dia voaheloka ho niantsy “ady tamin'Andriamanitra,” ary voatonona ho “Mohareb” (fahavalon'Andriamanitra). Mitovy heloka amin'ireo lehilahy roa novonoina tany Tehran tamin'ity herinandro ity ry zareo. Manoratra ny Reporters sans Frontieres fa nosamborina koa ireo mpitoraka blaogy sasany mpikambana ao amin'ity Komity ity nandritra ny herinandro faramparany teo. Tsy iza izy ireo fa i Parisa Kakei, nosamborina tamin'ny 2 Janoary; Shiva Nazar Ahari tamin'ny 24 Desambra; sy Said Kanaki ary Said Jalali tamin'ny 1 Desambra. Mbola voatana any amin'ny Faritra 209-n'ny fonja Evin malaza ratsy any Tehran izy ireo ary mbola anaovana tsindrihazolena mba hanondro ireo mpikambana hafa ao amin'ilay komity sy hampirisika ny fandravàna izany.
Manoratra i Chrr [fa] fa terena hanao “fibabohana amin'ny fahitalavitra” i Mehrdad Rahimi.
Manampy ity fikambanana ity :
Toa nafindra avy tany amin'ny efitrano nanokanana azy, hono, Koohyar Goodarzi, mpanao gazety sady mafana fo ho an'ny zon'olombelona, ka any amina efitra ho an'olona telo any amin'ny Faritra 209 any amin'ny fonjan'ny Evin. Efa hatramin'ny 20 Desambra 2009 i Goodarzi no voatana.
Tsy mazava hoe hatraiza ny idiran'ny fitorahan'izy ireo blaogy amin'ny fisamborana azy fa izy roa ireo dia samy mitoraka blaogy momba ny zon'olombelona.
Mehrdad Rahimi ao anatin'ny blaoginy dia miresaka momba ireo olana ara-sosialy, politika sy toe-karena ary koa ireo lalànan'ny asa. Nanoratra izy indray mandeha :
Maro ireo notànana nandritra ny volana maro nefa tsy nanan-jo hihaona amina mpisolo vava.
Tao anatina lahatsoratra lava, niantso ho an'ny fahafahana ho an'ireo mpikambana hafa ao amin'ny Komity ho an'ny Zon'oombelona i Koohyar Goodarzi.
Ireo manampahefàna Iraniana dia efa nampiditra am-ponja mpitoraka blaogy maro toa an-dryHossien Derakhshan nandritra ireo taona faramparan teo. Omid Reza Mir Sayafi, mpitoraka blaogy Iraniana 29 taona sady mpanao gazety dia maty tany am-ponjan'ny Evin any Tehran tamin'ny 18 Marsa 2009.